Anyị nyochaa ọhụrụ Amazon Fire HD 8 2020 | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nyochaa ọhụrụ Amazon Fire HD 8 2020
Ọtụtụ na-ekwusi ike ịhapụ mbadamba, ngwaahịa nnukwu ihuenyo ahụ na azịza dị mfe lekwasịrị anya na-eme ka anyị rie ọtụtụ ọdịnaya dị ka o kwere mee. Ọ bụ eziokwu na Ekwentị na-ebuwanye ibu ma nke ahụ anaghị enyere aka, Ma ezigbo mbadamba nkume dị ọtụtụ ma na-enyere ngwaọrụ ndị ọzọ aka izu ike.
Anyị nwere Amzon Fire HD 8 ọhụrụ n'aka anyị, nke dị ọnụ ala, ọhụrụ mbadamba nwere ọtụtụ ihe iji nye obere ego. Ka anyị lebakwuo anya na ngwaahịa Amazon a na-achọ ịmata ihe nke na-adọrọ uche dị ukwuu.
Dị ka n'oge niile, anyị kpebiri iso vidiyo a ị nwere ike ịhụ n'elu. Na vidiyo anyị weghachite Amazon Fire HD 8 a ohuru na otu o si agha n’oge. Vidiyo bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee nyocha, n'ihi ya ana m akwado ka ị lee ya anya tupu ịnụ ụtọ ọdịnaya ndị ọzọ n'isiokwu a, Nakwa iji ohere ịdenye aha na channelụ Actualidad Gadget ma hapụ anyị ihe ka anyị nwee ike ịga n’ihu na-ewetara ụnụ akụkọ na ozi ọma ọzọ.
Ọ bụrụ na n'aka nke ọzọ ị gosilarịrị na ị hụrụ ngwaọrụ ahụ n'anya, ị nwere ike ịzụta ya RERE EBE A ọnụahịa kacha mma.
3 Ngosipụta na ọdịnaya multimedia
Dị ka ọ dị na ngwaahịa Amazon, anyị na-ekwu ntakịrị. A matte plastic ahu na akpa ilekiri nnọọ inogide. Ihu nwere nnukwu okpokolo agba ma ọ nweghị ihe ikwubiga okwu ókè, yana igwefoto dị na etiti na ntanetị. Anyị nwere akụkụ nke 202 x 137 x 9,7 mm maka ngụkọta nke 355 gram. Ọ bụghị oke ọkụ, dị ka a ga - asị na Kindle nwere ike ịbụ ọmụmaatụ, mana ọ dịghịkwa arọ.
Anyị nwere ike ijikwa ya otu aka n'ụzọ dị mfe ma nke ahụ bụ otu n'ime isi uru ya, n'ihi na ọ bụghị dịkwa oke oke.
Ọzọkwa, oge a anyị nwere ike ịzụta Fire HD 8 naanị na nwa, ọ bụ ezie na a hụrụ ọtụtụ agba na mbido ya. N'ezie, anyị nwere usoro nke na-adọrọ mmasị na-acha uhie uhie, acha anụnụ anụnụ na ọcha. Na ala anyị na-achọta otu n'ime akwụkwọ ọhụụ, ọdụ ụgbọ USB-C nke mechara dochie microUSB, yana olu, ike na bọtịnụ Jackmm 3,5mm. Ntinye ụda na-ada na otu akụkụ bezels, ihe na-eme ka o doo anyị anya ebumnuche Amazon na anyị ga-eji ya na-agbada iji rie ọdịnaya na ịkpọ oku vidiyo.
Na teknuzu larịị anyị na-ahụ ọtụtụ egosipụta karịa ike. Anyị kwesịrị ikwu na e nwere teknụzụ nsụgharị abụọ, Amazon Fire HD 8 na "Plus" mbipute. Anyị anwalewo ma nyochaa ụdị mbipute nkịtị, ọ nwere ihe nhazi 2 GHz quad-core, ihe nke na-adaba na ya tọrọ ya nwanne bụ ndị Plus, Otú ọ dị, anyị nwere 2 GB nke Ram, n'ihe banyere Plus anyị nwere ike iru 3GB RAM.
Na ọkwa nchekwa, anyị nwere ike ịnweta Amazon Fire HD 8 na nsụgharị abụọ, otu nwere ikike nke 32GB ma nke ọzọ nwere 64GB., ma gbasaa site na oghere microSD ruo 1TB na mkpokọta.
Zụta Amazon Fire HD 8> Jikọọ
Banyere njikọta anyị nwere WiFi ac dakọtara na ìgwè abụọ ahụ na-adịbu, 2,4 GHz na 5 GHz, na a dịtụ mma iche, anyị na-enwebeghị nsogbu na nke a na gbapụrụ ọsọ nke 300MB symmetric. Maka akụkụ ya, na mpaghara ikuku anyị nwekwara Bluetooth 5.0 na-enye anyị ohere jikọọ ihe atụ ekweisi na akpaka mmekọrịta. Kwuo na USB-C bụ OTG, ọ na-eje ozi dị ka ebe nchekwa dị na mpụga.
Anyị na-eji ohere a ekwupụta na Amazon Fire HD 8 a nwere abụọ ese foto, otu n'ihu na otu azụ, ma na 2MP mkpebi nke ahụ ga-enyere anyị aka Dekọọ vidiyo na mkpebi HD 720p. Ngwa dị oke mfe, ịpụ n'ụzọ ma mee mkparịta ụka vidiyo na-enweghị nkwupụta ihu abụọ ọzọ.
Ngosipụta na ọdịnaya multimedia
Ihuenyo bụ 8 sentimita asatọ, dị ka aha ya na-egosi, na nwere ahụkarị mkpebi nke 720p, kpọmkwem 1280 x 720 na a omenala akụkụ ruru. Anyị nwere otu panel IPS LCD site na nchapụta etiti nke na-enye anyị ohere iji ọdịnaya multimedia na-enweghị nsogbu, nke nwere ike ịta ahụhụ mgbe ọkụ kụrụ ya ozugbo.
Na-akwado ụda protocol Nkịtị dị na ngwa dị ka Netflix ma ọ bụ Amazon Prime Video, Na nyocha anyị YouTube ị nwere ike ịhụ ogo nke ụda na vidiyo.
Anyị na-eche ihu ngwaahịa ntinye na ọnụahịa dị oke oke, ọ na-egosi. A naghị ahụ ụda ahụ maka ike ya ma ọ bụ doo anya, mana ọ zuru ezu maka gburugburu ime ụlọ. Otu ihe ahụ mere na ihuenyo ahụ, ọ na-enye nchapụta zuru oke maka n'ime ụlọ, mana ọ nwere ike ịta ahụhụ site na ntụgharị uche ma ọ bụ enweghị ike n'èzí na awa nke oke ọkụ.
Ma ọ bụghị, anyị ga-eburu n'uche ọnụahịa nke ngwaahịa a tupu anyi edo onwe anyi elu.
Ngwaahịa Amazon ndị a nwere ụdị gbanwere nke gam akporo nke na-ebute ọrụ ya niile ụzọ. Nke a apụtaghị na site na ịme "aghụghọ" anyị nwere ike ịwụnye ọ bụla .APK, mana nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ahịa ngwa Amazon na-edozi ahụ nke ọma. N'ụzọ dị otú a, njirimara onye ọrụ dị mma ma na-elekwasị anya karịsịa na ihe e mepụtara maka ngwaahịa a: Gụọ, rie vidiyo na ọdịyo ma chọgharịa.
Anyị nwere ike ịgbanwe ọrụ ndị a n'ụzọ dị mfe site na mmegharị ole na ole. Anyị na-achọta minimalism na enweghị nsogbu na akụkụ ndị ọzọ, otu ihe atụ bụ obere ọnụnọ nke nhazi atụmatụ na njirimara onye ọrụ.
N'ihi na ihe aga-eme ihe nke gị imewe Nke a Amazon Fire HD 8 na-agbachitere onwe ya nke ọma, anyị nwere ike ịnyagharịa na-enweghị nsogbu, piakota Amazon Prime Video na ọbụna kpọọ egwu na nyiwe dị iche iche na-enweghị nsogbu. O doro anya na anyị na-achọta ọtụtụ ihe mgbochi mgbe anyị chọrọ igwu ihe dị mgbagwoju anya karịa Candy Crash, Thedị omenala nke gam akporo na 2 GB nke RAM nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme na nke ahụ.
Ngwaahịa a bụkwa ihe ọzọ dị mma iji gụọ n'ihi nha ya na nnukwu njikọta ya na Kindle, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ. Nwere ike ịzụta ya 99,99 na njikọ a gaa ụlọ ahịa Amazon.
Mmekọrịta na ọrụ Amazon
Ndakọrịta na ọrụ ndị ọzọ
Lekwasịrị anya n'ịgụ ihe, na-ewe vidiyo na nchọgharị
UI na-adịghị nwayọ nwayọ mgbe ụfọdụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Anyị nyochaa ọhụrụ Amazon Fire HD 8 2020
Na-asọpụrụ Ime Anwansi Earbuds: Kpọsaa Agha na Earbuds Dị Oké Ọnụ (Nyocha)
E nyere PlayStation 5 iwu niile, nkọwa niile